ईकामर्स वेबसाइटहरूको लागि तेस्रो-पक्ष एकीकरण - साम्प्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
9 सक्छ, 20217सक्छ, 2021 ल्युभोभ पञ्चेन्को अरबी फ्रीलान्स, B2B, शुरुआतीहरूको लागि सर्वश्रेष्ठ फ्रिल्यान्स वेबसाइटहरू, ब्लग, व्यापार, चीनियाँ स्वतन्त्रता, विशेष समाचार, FGG कम लागत बजार, फ्रीलान्स ग्लोबल गिग (FGG) कम लागत बजार, फ्रेन्च फ्रीलान्स गिग, ग्लोबल थोक अनलाइन, हिन्दी फ्रिल्यान्स गिग्स, इन्डोनेसिया फ्रीलान्स गिग्स, अनलाइन थोक र B2B, अनलाइन थोक र B2B बजार, पोर्तुगाली फ्रीलान्स गिग्स, रसियन फ्रीलान्स गिग्स, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, स्पेनिश फ्रीलान्स गिग, प्रविधि, थोक, थोक - B2B, थोक र B2B बजार, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
एक eCommerce स्टोर अपरेट गर्न, तपाईंले पहिले एक अनलाइन भुक्तानी गेटवे प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
तपाईंको सूची प्रबन्ध गर्न समय र प्रयासको एक महत्त्वपूर्ण रकमको आवश्यक छ।
तपाइँको सन्देशहरू स्वचालित गरेर, तपाइँले तपाइँको कामको बोझलाई घटाउनुहुनेछ।
एक eCommerce स्टोर अपरेट गर्न, तपाईंले पहिले एक अनलाइन भुक्तानी गेटवे प्राप्त गर्नुपर्नेछ। एउटा सुरक्षित छ र क्रेडिट कार्ड लेनदेन सजिलैसँग प्रमाणित गर्दछ। केही विचार गर्नुहोस्।
यो भुक्तानी पोर्टल छनौट को अधिकता प्रदान गर्दछ। यो कार्यप्रवाह अनुकूलनको लागि एक मुट्ठीभर उपकरणको साथ आउँदछ। ग्राहकहरुलाई खुशी बनाउन, यसको द्रुत भुक्तान र चेकआउटहरू छन्। केही व्यवसाय मालिकहरूले वित्तीय प्रतिवेदन र सुरक्षा उपकरणहरूले यसलाई प्रस्ताव गर्दछ। तर केहि पनि चाँडो र सुरक्षित भुक्तान प्रसंस्करण पिटाई। साना व्यवसाय र सुरूवातहरूले यो आदर्श फेला पार्दछ।
बिलि and र भुक्तानी उनीहरूले प्रस्ताव गर्ने नियमित प्याकेजहरूमा सामेल छन्। अन्य विशेष प्याकेजहरू रडार फ्रड रोक्न प्रोग्राम, सिग्मा मार्केट डाटा प्रबन्धक, र एटलस अवधारणा स्टार्टअप सेवा सामिल छन्। यी प्याकेजहरू प्रत्येकको अलग मूल्य छ। तिनीहरू प्लेटफर्मको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध छन्। तथापि, तपाईले सम्पूर्ण नेटवर्कमा पहुँच पाउनुभयो जुन तपाईको सक्रिय दरमा २.2.9 प्रतिशतको दर $ ०.$ को भुक्तान दरमा हुनेछ।
२. म्याग्न्टो २ का लागि चेकआउट:
यो भुक्तानी गेटवे संग समावेश गरीएको छ म्यागेन्टो २ ईकामर्स प्लेटफर्म। यसको लागत फरक हुन्छ, र तपाईं वार्षिक आधारमा भुक्तान गर्नुहुन्छ। थप रूपमा, यो तपाईंको निवल लाभ र तपाईंले छनौट गर्नुभएको समाधानहरूमा निर्भर गर्दछ। यो प्लेटफर्म मध्यम-देखि-ठूला आकारका व्यवसायहरूमा उपयुक्त छ त्यसैले यो हो। Magento2वाणिज्य प्रवेश-स्तर संस्करण एक वर्ष को बारे मा ,22,000 XNUMX लागत। यसका दुई प्राथमिक सुविधाहरूले शिपिंग जानकारी र भुक्तान जानकारी प्रदान गरिरहेका छन्। तर, तपाईं प्लेटफर्म निजीकृत गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको प्राथमिकताहरू फिट गर्न सुविधाहरू थप्न सक्नुहुन्छ। तपाईं अनुकूलन भुक्तानी विधिहरू, शिपिंग क्यारियर र पुष्टिकरण, र आदेश प्रमाणीकरण थप्न सक्नुहुन्छ।
यो भुक्तानी गेटवे ग्राहकहरु लाई भुक्तानी गर्न को लागी सरल बनाउनु हो। साधारणतया किनभने ती सेवाहरु को लागी भुक्तान गर्न को लागी एक खाता खोल्न को लागी आवश्यक छैन।
बिलि services सेवाहरू, मोबाइल र मोटो भुक्तानहरू, जालसाजी रोक्ने, अनलाइन सेवाहरू, र सुरक्षा प्राथमिक सुविधाहरू हुन् जुन यो प्लेटफर्ममा भिन्न छ।
यस प्रकारको प्लेटफर्मको लागत तपाईंको कम्पनीको प्रकृति र मापनमा निर्भर गर्दछ। यो साइट सेट अप गर्न को लागी, तपाईले एक महीना २$ डलर को लागी २.25 प्रतिशत प्रोसेसिंग शुल्क र and ०. per प्रति लेनदेन बजेट गर्न सक्नुहुन्छ
एक पटक शिपिंग गेटवे आवश्यक छ एक पटक तपाईंको ईकॉमर्स स्टोरमा उत्पाद खरीद भयो। यो निर्धारण गर्नका लागि कि कसरी प्याक गरी ग्राहकलाई डेलिभर गरिनेछ। शिपिंग गेटवेको ईन्टरफेस प्रयोग गर्नको लागि सरल हुनुपर्छ। यो डेलिभरी प्रक्रियालाई स्वचालित गर्न, अर्डरहरू र ईन्भेन्टरी प्रबन्धन गर्न, प्याकिंग प्याकिंग लेबलहरू, ट्र्यापिंग लदानहरू, र कूरियर शिपिंग दरहरू तुलना गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। निम्नलिखित शिपिंग गेटवेहरू विचार गर्नुहोस्: शिपो, ओर्डोरो, फेडएक्स, र अर्डरकप।
इन्भेन्टरी प्रबन्धन प्रणाली
तपाईंको सूची प्रबन्ध गर्न समय र प्रयासको एक महत्त्वपूर्ण रकमको आवश्यक छ। ईन्भेन्टरी व्यवस्थापन को लागी धेरै तेस्रो पक्ष प्रणालीहरु को लागी धन्यवाद, यो स्वचालित हुन सक्छ। अब तपाईं मैन्युअली इन्भेन्टरी प्रबन्ध नगरी यो गर्न सक्नुहुनेछ। यस कारणका लागि तल महान सफ्टवेयरको केहि उत्कृष्ट उदाहरणहरू छन्।
यो क्लाउड-आधारित सूची व्यवस्थापन सफ्टवेयरले साधारण अर्डर व्यवस्थापन सक्षम गर्दछ। थप रूपमा, यसले तपाईंलाई तपाईंको वितरण च्यानलहरू सबै मार्फत तपाईंको सूची सि sy्ख्रोनाइज गर्न सक्षम गर्दछ। यसले प्रबन्धन गर्न सजिलो बनाउँदछ। यो पनि सुनिश्चित गर्दछ कि तपाईं जहिले पनि जहाज पठाउनुभयो र सही वस्तु तयार गर्नुहोस्। यो तपाईको कम्पनी सुचारु रूपले चलाउन सहयोगका लागि उत्कृष्ट उपकरण हो।
यो प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने फाइदाहरूमध्ये एउटा हो कि किट किन्नु अघि तपाई यसलाई १ 14 दिन बाहिर जाँच गर्न सक्नुहुन्छ। औसतमा, तपाइँ प्रत्येक प्याकेजहरूको लागि month १२० र £ २०० को बीचमा सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक उच्च मूल्य जस्तो देखिन्छ, तर गुणवत्ता सस्तो आउँदैन। थप रूपमा, ट्रस्टपायलट र क्याप्ट्रामा उनीहरूको प्रतिक्रियाले तपाईंलाई चकित पार्नेछ।
च्यानलग्राबरले तपाईंलाई तपाईंको सूची, प्रेषणहरू, र अर्डरहरू ट्र्याक र नियन्त्रण गर्न सक्षम गर्दछ। अन्य सुविधाहरूको माझमा, यसले तपाईंको स्टोरमा सूचीकरण र अनुकूलन सामग्रीको साथ मद्दत गर्दछ। यो पनि डिजाइन र तपाइँको ग्राहकहरु लाई इनभ्वाइसहरू बुझाउन मद्दत गर्दछ। प्रबन्धनको सर्तमा, यसले अर्डर प्रबन्धन प्रणाली र वितरणलाई द्रुत पार्छ। यो एक बहुमुखी प्रणाली हो कि ग्राहक सन्देशहरू पनि ह्यान्डल गर्दछ। तपाईंलाई सुरू गर्न तिनीहरू निःशुल्क परीक्षण प्रस्ताव गर्दैनन्। तर तिनीहरूले उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रस्ताव गर्छन् यदि तपाईं समस्यामा पर्नुभयो भने।
यो सफ्टवेयर प्रयोग गर्नका लागि, तपाईंले आधार प्याकेजको लागि प्रति महिना कम्तिमा $ १ .० बजेट गर्नु पर्छ।
Fin. अन्तिम सूची:
यो कार्यक्रम तपाइँलाई मूल्य र उत्पादन जानकारी सजिलै विश्लेषण गर्न सक्षम गर्दछ। तपाईका अर्डरहरू ट्र्याक र क्रमबद्ध गर्न, बारकोडहरू उत्पादन गर्न, र ट्र्याक खरीदहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो विभिन्न प्याकेजहरुमा उपलब्ध छ। कांस्य किट एक महिना $ for को लागि उपलब्ध छ। यसले अधिकतम दुई प्रयोगकर्ता र १,००० मासिक आदेशहरू समर्थन गर्दछ। यस दायरा मा, तपाईं मात्र उत्पादन गर्न सक्नुहुनेछ 99 उत्पादन को टुक्रा। यदि तपाईंसँग केहि प्रश्नहरू छन् भने विस्तृत ईमेल समर्थन पनि उपलब्ध छ।
प्रत्येक महिना, चाँदी किटको लागत costs २275। यसले कांस्य किटमा समावेश सबै सुविधाहरू समावेश गर्दछ। यो अतिरिक्त प्रयोगकर्ता स्थान, उत्पादन, अर्डर, र एकीकरणको साथ पनि आउँदछ। प्रत्येक महिना, गोल्ड र प्लेटिनम प्याकेजहरूको लागत क्रमशः 449 649 and र $ XNUMX$।। जे होस्, एक अनुकूलित प्याकेज उपलब्ध छ। यो प्याकेज तिनीहरूका लागि हो जुन ठूलो व्यापार सञ्चालन गर्दछ वा आधार प्याकेजमा थप सुविधाहरू थप गर्न आवश्यक पर्दछ।
चलानी व्यवस्थापन प्रणाली
लेखा व्यवस्थापन प्रणालीहरू तपाईंको कम्पनीको सफलताको लागि महत्वपूर्ण छन्। तिनीहरूले तपाईंलाई कुशलतापूर्वक ड्राफ्ट, बुझाउन, र ग्राहकलाई इनभ्वाइसहरू चलाउन सक्षम गर्दछ। हामी सफ्टवेयरको तीन टुक्रा जाँच गर्छौं जुन तपाईंलाई रुचि हुन सक्छ।
Scoro तपाईं आवर्ती भुक्तानी सेट अप गर्न सक्षमको एक राम्रो सुविधा छ। यसको साथ, तपाईं सजीलै इनभ्वाइसहरू सिर्जना गर्न र अनुकूलन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं ग्राहकलाई थकित अनुस्मारकहरू पठाउन पनि सक्नुहुन्छ र ग्राहक वा परियोजनाको नाफा देख्न पनि सक्नुहुन्छ। यो चलानहरू, ग्राहकहरू, र सबै एकै ठाउँमा सबै परियोजनाहरू प्रबन्ध गर्नका लागि यो उत्कृष्ट उपकरण हो। यो कार्यक्रम एक महिना $ 26 मा शुरू हुन्छ र एक 14-दिन नि: शुल्क परीक्षण समावेश गर्दछ।
यो सफ्टवेयरको एक उचित मूल्यको टुक्रा हो जुन धेरै साना व्यवसाय मालिकहरूलाई अपील गर्दछ। यसको आधार मूल्य एक महिना $ १० हो, र यसले धेरै उपयोगी सुविधाहरू समावेश गर्दछ। यसले तपाईंलाई प्लेटफर्ममा अर्डरहरू र ट्रयाक लेनदेन सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। तपाइँ यसलाई तपाइँको ग्राहकहरु लाई पठाउन कस्टम इनभ्वाइसहरू सिर्जना गर्न प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
तर सबै भन्दा अपील सुविधाहरू केहि मुद्रामा कारोबार विकल्प, बिक्री कर को प्रबंधन, र आवर्ती भुक्तानी अनुसूची हो। बहुमत प्रयोगकर्ताहरूले मोबाइल अनुप्रयोग मार्फत प्लेटफर्ममा पहुँच गर्न सक्दछ भन्ने तथ्यलाई बुझेका छन्।
यो अर्को उचित मूल्यमा चलानी उपकरण हो। यो एक महिना costs 15 लागत। यसको किफायती बाहेक, धेरै प्रयोगकर्ताहरूले यसको सुविधाहरूको लागि यसको मूल्यांकन गर्दछन्। तिनीहरू एकल अनुप्रयोगमा चलानी, समय ट्र्याकिंग, र लागत ट्र्याकिंग संयोजन गर्दछ। फ्रेशबुकका साथ तपाई अनुकूलन गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईंको ग्राहकलाई असीमित संख्याको इनभ्वाइसहरू पेस गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं अनलाइन क्रेडिट कार्ड भुक्तानी स्वीकार गर्न सक्नुहुन्छ र ढिला भुक्तानीको लागि सूचनाहरू सेट अप गर्न सक्नुहुन्छ।
ईमेल र मार्केटिंग स्वचालन एकीकरण
तपाइँको सन्देशहरू स्वचालित गरेर, तपाइँले तपाइँको कामको बोझलाई घटाउनुहुनेछ। यसैकारण ईमेल र मार्केटिंग एकीकरणहरू महत्त्वपूर्ण छन्। हामीले तल केहि उदाहरणहरू समावेश गरेका छौं।
यो ,80,000०,००० भन्दा बढी प्रयोगकर्ताहरूको एक मजबूत ईमेल नेटवर्क हो। प्रति दिन, तिनीहरूले एक लाख भन्दा बढी ईमेलहरू पठाउँछन्! यसले कम सुविधाहरू, एसएमएस विज्ञापन, ईमेल स्वचालन, र एक अवतरण पृष्ठ सम्पादक जस्तै सुविधाहरू समावेश गर्दछ।
यो सबै भन्दा आकर्षक पक्ष नि: शुल्क परीक्षण यो नयाँ ग्राहकहरु प्रदान गर्दछ। यी नि: शुल्क परीक्षणहरू फोन समर्थन र एक दिन 300०० ईमेलको साथ आउँदछ। जे होस्, तपाई साना किटको लागि month २aमहिनामा भुक्तान गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा ,25०,००० ईमेलहरू छन्।
२. लगातार सम्पर्क:
यो साना र मध्यम आकारका कम्पनीहरूको मार्केटिंगका लागि उत्कृष्ट प्लेटफर्म हो। यो एक धेरै सहज GUI संग आउँछ, र यसको प्रविष्टि-स्तर प्याकेज एक महिना मात्र just २० हो। सम्भावित प्रयोगकर्ताहरूको बहुमत 20०-दिन नि: शुल्क परीक्षण द्वारा चित्रित हुनेछ।
उपकरणको मुख्य सुविधाहरू मध्ये उन्नत सम्पर्क प्रबन्धन, सामग्री विभाजन, विज्ञापन retargeting, समुदाय समर्थन, र तपाइँको फेसबुक खाताबाट सीधा तपाइँको विज्ञापन शुरू गर्न को क्षमता हो।
यो एक उत्कृष्ट ईमेल स्वचालन प्लेटफर्म हो जुन तपाईको व्यवसायको विशिष्ट आवश्यकतालाई यसको मापनमा आधारित अनुकूलित गर्न सकिन्छ। भुक्तानी पूर्ण सीधा तरीकाले गरिन्छ। यसको लागत तपाईका ग्राहकहरूको संख्याले निर्धारण गर्दछ। यो पहिलो २,49०० ग्राहकहरुका लागि month। एक महिनाको मूल्य हो। यद्यपि यो लगभग २०,००० ग्राहकहरुका लागि प्रति महिना $ 2,500०308 सम्म पुग्न सक्दछ।
जब तपाईं एक व्यक्तिगत उद्धरण प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाईं सदस्यता संख्या बढाउन सक्नुहुन्छ र मूल्य योजना जुन तपाईंसँग ड्रिपमा हुनुहुन्छ। र सबै भन्दा राम्रो पक्ष हो कि तिनीहरूले मूल्य बिन्दु बिना सुविधाहरूको एक प्रशस्त प्रस्ताव। A / B परीक्षण, सूची विभाजन, स्वचालित ईमेलहरू, र eCommerce CRM उपकरणहरू यी सुविधाहरूमध्ये केही मात्र हुन्।
यो महत्वपूर्ण छ कि तपाइँको eCommerce स्टोर को लागी उपयुक्त तेस्रो पार्टी एकीकरण चयन गर्न को लागी। यो तपाईंको पूर्ण क्षमतामा तपाईंको व्यवसायलाई पुनर्जीवित गर्न सक्षम छ। जे होस्, तपाईले यी सबै सेटअपको कठोरताहरूमा जानु आवश्यक पर्दैन। तपाईं राम्रो परिणामहरू सुनिश्चित गर्न यसलाई पेशेवरहरूमा राख्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो विशेषज्ञहरु तपाइँको ब्रान्ड अनलाइन वा अफलाइन छन् कि छैन, हाम्रो व्यापक सेवाहरू मार्फत यी सबै कार्यहरू पूरा गर्न तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्छ।
सांप्रदायिक समाचार WebMeridian
उनी एक भावुक ईकामर्स विशेषज्ञ हुन् जसले ब्रान्डहरूलाई उनीहरूको व्यवसाय बढाउन मद्दत गर्दछ अनलाईन स्टोरहरूको लागि अत्यावश्यक सुविधाहरूको लागि सुझावहरू सहित।